Ọkachamara Semalt: Ihe Njehie Mgbochi I Kwesịrị Ịhapụ
Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ echefuola banyere mkpebi ha nke Afọ Ọhụrụ,Ichefu mkpebi mkpebi SEO nwere ike inwe nsogbu dị njọ. A ka nwere ọnụ ọgụgụ dị oke mkpa nke na-emetụta arụmọrụ SEO gịadịghị mma. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị oge na-aga ịmegharị mgbalị gị ma mee ihe kachasị mma nke usoro SEO dị ukwuu .
Onye isi njikwa ndị ahịa ahịa Ọkachamara ,Frank Abagnale kwuru na 10 SEO na-emehie gị ka ị zere iji mee ka ọkwa gị dị elu.
1. Na-eche na ọdịnaya dị mma gbanwere maka SEO
Ịzụ ahịa ọdịnaya dị oke egwu ma rụọ ọrụ nke ọma n'akụkụ SEO iji meliteọkwa gị. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-eche na ha nwere ike dochie SEO site na nnukwu ọdịnaya nke bụ nnukwu ụgha. Ọ bụ ezie na e nwereọtụtụ ihe atụ zuru oke nke ọdịnaya dị oke mma nke na-agbanye elu n'enweghị mgbalị ọ bụla na njikarịcha, nke a na-abụkarị ma e wezụga ma ọ bụghị iwu.
2. Iche echiche nke ọma ga-enwe njikọ n'enweghị njikọ njikọ
E nwere mgbe ọ bụla a ga-enwe ike inwe ọdịnaya dị mma n'enweghịmgbalị ọ bụla na ụlọ njikọ. Otú ọ dị, n'ọtụtụ ọnọdụ, ịhapụ iwu njikọ ga-eme ka pasent 90 nke ọdịnaya gị nọrọforlornly na gị na saịtị. Dị ka akwụkwọ 2016 State of Link Building Survey, njikọ ntanetị dị irè gụnyere digital PR, guestblogging na ịmepụta ọdịnaya magburu onwe ya nwere ike ịdọrọ njikọ.
3. Ịde blọgụ ndị ọbịa na saịtị na-adịghị mma
Mgbasa ozi ndị ọbịa bụ ụzọ dị irè isi wuo njikọ, ịba ụbana-edu ma na-enweta ikpughe. Nanị nsogbu bụ na ịkwanye na saịtị na-ezighị ezi nwere ike imebi aha nke saịtị gị ma metụta gịọkwa. Iji zere nsogbu ndị dị otú a, na-agbasi mbọ ike iji jide n'aka na saịtị ahụ ịchọrọ ịbanye na post na-egosi aha, egwuregwuelu na niche gị ma kwupụta ọdịnaya pụrụ iche, nke dị elu.
4. Enweghị ike ịkwalite ọdịnaya gị
Ndị mmadụ ga-ama ihe gbasara ọdịnaya gị ma ọ bụrụ na ị kwalite na kesaaya. Enweghi nkwado n'ebumnuche, ọdịnaya gị ga - ezukọta ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ njikọ na saịtị gị. Dị ka otu nnyocha e meresite na BuzzSumo na Moz, pasent 50 nke ihe ntanetị nile ha na-enyocha nwere ihe na-erughị pasent abụọ Facebook nwere mmasị ma ọ bụ na-eketa ka pasent 75 enweghịnjikọ ndị ọzọ. Ihe nkowa kachasị ike maka arụmọrụ a bụ ọdịda na nkesa nke ọma..
5. Spammy SEO ụzọ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ahịa maara nke ọma iji zere itinye aka na SEO ochie aeji eme ihe, ụfọdụ ụlọ ahịa ka na-eji ya eme ihe dị iche iche. Ihe omuma atu nke usoro ihe omuma nke ulo oru gunyere ime ugwomaka njikọ njikọ ederede ma ọ bụ mgbasa ozi ọkọlọtọ na saịtị ọzọ na-enweghị njikọ na-esote na-arịọ ma rịọ nyochaa ngwaahịa na njikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị.
6. Ịmepụta ọdịnaya dị mkpirikpi
Ọtụtụ oge, ogologo oge na-ebuli elu ma na-enye mmaahụmahụ onye ọrụ na-atụle na obere oge posts, Otú ọ dị, ọ bụghị ihe nkwekọrịta maka obere ọdịnaya iji bulie elu. Dị ka serpIQ, peeji ndị dị n'eluọnọdụ na-enwe ogologo oge ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere peeji nke dị elu nke nwere mkpirikpi peeji nke. N'ebe a, iwu zuru oke, ogologo ogemma.
7. Enweghi njikọ nke ụlọ
Ijikọta ọdịnaya gị gaa na saịtị ndị ọzọ na ibe dị na saịtị gị na-enye mmaahụmahụ onye ọrụ ma dịkwa mma maka SEO. Omume a na-enye aka ikesa njikọ na saịtị ahụ ma na-eme ka metrics gụnyere gụnyereechiche ihuenyo na oge na-aga. Usoro ndị dị irè nke njikọ njikọ ụlọ gụnyere itinye ederede ihe ochie kama itinye nanị mkpụrụ okwuịkwado, na-ejikọta ọdịnaya dị mkpa na ijikọta na peeji nke miri emi.
8. Ilekwasị anya na mgbasa ozi ọha na eze ma e jiri ya tụnyere njikọ
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi ọha na eze bụ ngwá ahịa ahịa ọdịnaya dị irè,ọ bụghị ihe mgbakwunye maka ịme njikọ njikọ. Mgbasa mgbasa ozi adịghị njọ maka SEO, ma ọ gaghị eburu ibu dị arọGoogle algorithm.
9. Ntinye ihe omimi na ojiji
N'oge a, nchọpụta isiokwu abụghị nanị maka ịchọta ndị mmadụokwu na okwu mkpirisi na ala. Ọ dịkwa mkpa ka ị jiri okwu ndị ahụ gafee ọdịnaya gị. Na mgbakwunye, ịkwesịrị ijiokwu ndị dị na ọdịiche nke isiokwu ahụ iji nyere aka na saịtị gị dị elu. Maka irè, a ghaghị iji nchọpụta isiokwu mee ihe dịka ige ntịna ogo ngwá ọrụ iji nyere gị aka ịzụlite ọdịnaya, izute mkpa ndị ahịa ma mee ka ike gị dịkwuo elu.
10. Njikọ na-adịghị mma
Ejiri njikọ ọ bụghị naanị iwe ndị ọrụ na-eleta saịtị gị, ma hanwekwara mmetụta na-adịghị mma na SEO gị. Ihe na-akpatakarị nke njikọ agbajiri gụnyere mgbanwe na nhazi URL, kpaliri ma ọ bụ ehichapụ ọdịnaya yanaezighi ezi na-eduzi. Iji nyere gị aka ịgbasapụ njikọ ndị gbawara agbawa ma mesoo ha n'ụzọ dị irè, tụlee iji Scannering Frog's Broken Link Checker Source .